Daawo:- Askar kudhaawacantay dagaalkii Sanaag oo lagu dabiibayo Ceerigaabo + wararkii ugu dambeeyay. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDaawo:- Askar kudhaawacantay dagaalkii Sanaag oo lagu dabiibayo Ceerigaabo + wararkii ugu dambeeyay.
July 27, 2019 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Somaliland, Soomaliya, Wararka maanta 0
Wararka inaga soo gaaraya gobolka Sanaag ayaa waxay sheegayaan in xaalada caawa ay dagan tahay kadib dagaal saacado badan qaatay oo kadhacay duleedka magaalada Ceerigaabo.
Dagaalka ayaa si toos ah ugu dhaxeeyay ciidamada Somaliand iyo maleeshiyaadka jabhadda Coll.Caare waxaana la xaqiijiyay inuu jiro qasaare baaxad leh.
Isbitaalka magaalada Ceerigaabo ayaa hadda lagu dabiibayaa qaar kamid ah askartii caare waxaana amaanka isbitaalka sugaya ciidamo katirsan maamulka Somaliland.